प्रचण्डपत्नी सीता दाहालको अवस्था गम्भीर — Imandarmedia.com
प्रचण्डपत्नी सीता दाहालको अवस्था गम्भीर
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपत्नी सीता दाहाललाई कोरोना संक्रमण भएको छ। भैंसेपाटीस्थित मेडिसीटि अस्पतालको आइसीयुमा उपचाररत सीतालाई निमोनिया पनि देखिएको छ।
उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको बताइएको छ। पार्किन्सन्ससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएको एक जटिल प्रकारको रोग ‘प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी पी.एस.पी. बाट लामो समयदेखि पीडित सीता दाहाल तीन दिनदेखि अस्पतालमा रहेको खुमलटार स्रोतले जनाएको छ।
हाल ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ। उहाँमा अस्ति कोरोना देखियो, स्वास्थ्यमा पनि समस्या देखिएपछि मेडिसिटीमा भर्ना गरिएको छ, सचिवालय स्रोतले भन्यो।
आईसीयूमा उपचाररत उहाँको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ। केही साताअघि अध्यक्ष प्रचण्डमा पनि कोरोना पुष्टि भएको थियो। प्रचण्ड हाल कोरोनामुक्त भइसकेका छन।
तेस्तै, प्रकाश दाहालको मृत्युबारे रेनु दाहालले गरिन यस्तो खुलासा, जोडियो केपी ओलीको नाम: नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ तथा भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले केपी ओलीका कारण आफ्नो भाई प्रकाश दाहालको ज्यान गएको बताएकी छन्।
समाजिक संजाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै दाहालले (बुवा) माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) केपी ओलीलाई भोट माग्न झापा नगएको भए प्रकाशलाई बचाउन सकिने सम्भावना रहेको बताएकी हुन्।
ओलीलाई भोट माग्न आोलीको क्षेत्रमा ओलीसहित अध्यक्ष क. प्रचण्ड झापा जादा घरमा आमा मात्र, तेहि पनि पार्किन्सनको बिरामी। भाईको मध्यरातमा अचानक स्वास्थ्यमा समस्या आई दुखद घटना घट्यो। उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्।
घरमा परिवारका सदस्य कोहि पनि नभएको बेला सबै आआफ्नो चुनाबी मैदानमा, बिरामी आमा मात्र घरमा, अकालमा उपचार पनि नपाई। उनले लेखेकी छन्, ‘के थाहा समयमै अस्पताल लैजान पाएको भए भाईको ज्यान जोगीन पनि सक्थ्यो।
झुक्किएर प्रचण्डलाई भोट माग्न दुई चोटी आएँ’ भन्ने ओलीको भनाईलाई खण्डन गर्दै उनले लेखेकी छन्, ‘यस्तो परिस्थितीबाट माओबादी सॅगको सहकार्यले मात्र ओली प्रधानमन्त्री बनेको, झन्डै दुई तिहाईको सरकार के ओली एक्लैले ल्याएको हो ?
उनले फेरी बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्न चुनैति समेत दिएकी छन्, ‘हो भने हामीले साथ छोडिदीदा त सबै गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो त । धेरै नै फुर्ती लाउनेले अब बनायर देखाए भो त। उनले ईतिहासमा दुई पटक प्रधानमन्त्री माओबादी कै सहयोगमा भएकाले ठुला कुरा नगर्न सल्लाह दिएकी छन्।
भरतपुर महानगरपालिकाको अधिवेशन उद्घाटन गर्न गएका आली प्रचण्डमाथि खनिएका थिए । आफूले दुई चोटी भोट मागेकाले प्रचण्ड विजयी भएको उनको आशय थियो। उनको यही भनाईलाई खण्डन गर्दै दाहालले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै अब सरकार बनाएर देखाउन चेतावनी दिएकी छन्।
यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजनामा गम्भीर धक्का लाग्ने संकेत देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीको चर्को आलोचना गरेका हुन्।
नारायणगढमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रचण्डले चितवन कांग्रेसलाई दिएको धोकाको मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘१० वर्षसम्म कांग्रेससँग गठबन्धन हुन्छ भन्दै रेणुका लागि भोट मागे, पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन मान्यौं,’ उनले भने, ‘रेणुले चुनाव जितेलगत्तै काठमाडौं पुगेर ओलीसँग हात मिलाए, चितवन कांग्रेस अब झुक्किँदैन, म फेरि भन्छु चितवन कांग्रेसले रुखमा बाहेक अन्यत्र भोट हाल्दैन ।’
स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस९माओवादी गठबन्धन गरेर भरतपुर महानगरमा मेयरमा रेणु दाहाललाई जिताउन कांग्रेस लागेको थियो । त्यो बेला गठबन्धन भए पनि चितवनका अन्य स्थानीय तहमा दुवै पार्टी एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए।
सत्ता गठबन्धनमा सँगै रहेको माओवादीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा गठबन्धनको उम्मेदवार मानेर भोट हाल्नुपर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता सुरु भएको देखिन्छ।
यहि ९ गते प्रचण्डले अन्तिम पटक चितवनबाटै उम्मेदवारी दिने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । ‘प्रचण्डको रणनीति बुझ्यौं, जसरी झुक्काइयो, अब झुक्किन्नौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘रुखमा बाहेक अन्यत्र भोट हाल्दैनौं भन्दा प्रचण्डलाई ज्वरो किन आउनुपर्यो ?
१२ गते प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी हुनुको साटो लखेट्ने कुरा गर्नु विडम्बना भएको बोलेका थिए। ‘रेणु र मलाई लखेट्ने भनेर सभापति भन्ने बोलेछन् भनेर प्रचण्डले बोल्नुभएछ,’ श्रेष्ठले जवाफ दिए, ‘सभापति भन्नेले होइन, चितवन कांग्रेसको सभापति हो भनेर राम्रोसँग बुझ्दा हुन्छ।
तेस्तै, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य प्रभु साहले सही क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु केपी शर्मा ओलीसँगै रहेको बताएका छन्। चितवनको माडीमा एमाले नगर कमिटीले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा साहले यस्तो बताएका हुन्।
नेकपा विभाजनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छाडेर ओलीतिर लागेका उनले माडीस्थित रामसीताको मूर्ति प्रतिस्थापित गरिएको अयोध्याधामलाई ठूलो धार्मिकस्थल बनाउनुपर्ने बताए। घर घरबाट पैसा उठाएर भए पनि अयोध्या धाम बनाऊँ, उनले भने, केपी ओलीसँग आमनेपाली छन्।
देशबासी छन्। कुनै हालतमा यो कदमलाई अघि बढाउनुपर्छ।उनले अहिले आफूहरु पुरानो एमालेमा नभएर नयाँ एमालेमा रहेको बताए। अहिले एमाले र माओवादी अलग भयो भन्ने छ। तर हामी अहिले नयाँ एमालेमा छौँ, उनले भने, सही क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट केपी ओलीसँग छन्।
बेइमानहरु मात्रै बाहिर छन्। उनले आफूहरुले सही नेतृत्व नपाएर अलमलमा परेको पनि बताए। हामीले सही नेतृत्व ठम्याउन सकेनौँ। प्रचण्डजीको बोलाई र गराईमा फरक छ। प्रचण्ड किसान मजदुरको योगदानबाट नेता हुनु भयो, उनले भने, तर
अहिले हामीलाई पनि लाग्छ किन यस्ता नेताको पछाडि लागिएछ। उनले आफूहरु कम्युनिष्टले देश बनाउँछ भनेर लडे पनि पछुताउने अवस्था आएको बताए। उनले चितवनमा प्रचण्डले राजनीतिक दाग लगाएको पनि बताए।
प्रचणड र प्रचण्डकी छोरीले गरेको खेल भरतपुरको लागि राजनीतिक दाग होु, उनले भने, हामीले नेपाल बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ। त्यसैले अहिले हामी केपी ओलीसँग गोलबन्द भएका छौ।